कुमारी युवा क्लब द्वारा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न - Naya marga
कुमारी युवा क्लब द्वारा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
नयाँ मार्ग समाचारदाता काठमाडौँ ।
फागुन ८,काठमाडौँ । कुमारी युवा क्लब द्वारा तत्कालिन अध्यक्ष स्व. नासिर खानको तेह्रौँ वार्षिक पुण्य तिथिको अवसरमा बृहत रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
क्लबका अध्यक्ष जीवन मानन्धरको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर प्रमुख अतिथिमा हुनुहुन्थ्यो । प्रदेश संसद बसन्त मानन्धर र जीवन डंगोल समेत उपस्थित रहेको कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले रक्तदान गरेका थिए।
यसै कार्यक्रमको अवसर पारेर चार घण्टा पाँच मिनेट २० सेकेण्डको अवधिमा विभिन्न ५९ वटा गीत गाएर ‘वल्र्ड बुक अफ रेकर्ड’ मा नाम लेखाएका मन्त्रि मानन्धरलाई क्लबले सम्मान गरेको थियो ।
चालीसौं पटक सम्म रक्तदान गरेको स्मरण गराउदै प्रमुख अतिथि राज्यमन्त्री मानन्धरले तत्कालिन अध्यक्ष स्व. नासिर खान प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। कार्यक्रम बहत्ति पोखरी स्थित क्लबको प्रागणमा सम्पन्न भएको थियो
तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सर्वोच्चलाई जवाफ- संविधानको ठाडो उल्लंघन हुँदा मुकदर्शक बन्न सक्दैनौं!
TikTok मा एकछ्त्र राज गर्न सफल बेलबासेको हातैको पौजाले !